Kajio ny fahadiovana
Henatra ho an'ny firenena ny fisian'ny aretina pesta amin'izao vanim-potoana izao satria aretina efa nanjavona tamin'ny taonjato ela tany izy io. Mandeha any amin'ny gazety any ankehitriny ny paikady atolotry ny ministeran'ny fahasalamana ho fisorohana ity aretim-boalavo ity.Asa fa tsy kabary no tena ilaina. Raha heverina fa fanafody mahomby ny fahadiovana dia tsy ny mponina irery ihany no terena hadio fa tonga hatrany ambony izany baikom-pitolomana izany. Alàna ny fako mba tsy hisy hitsindroka ary tsy ho lasa kilalaon'ny voalavo. Ampianarina ihany koa ny vahoaka hahay hitantana ny fakony ka hanena na hanafoana (raha azo atao) ireo fako tsy mety levona; Raha hividy hena na mofo gasy ohatra dia mitoondra fitoerana avy hatrany miala any an-trano amin'izay tsy mahazo harona tsy lena avy any amin'ny mpivarotra intsony;
Mbola maro koa ireo zatra manary fako etsy sy eroa kanefa azo atao tsara ny mitahiry izany any anaty paosy sy poketra ka rehefa tonga any an-trano vao ariana amin'ny toerana sahaza. Sady fanajana ny tena izany no fanajana ny hafa. Toe-tsaina avokoa izany rehetra izany. Na misy aza ny mpamokatra harona tsy lena ka ny mpanjifa mihitsy no tsy mitaky izany eo am-piantsenana dia foana ho azy ny fivarotana io fitoavana iray io.
Miainga amin'ny bitika ny zava-drehetra ka aoka tsy hanivaiva ny hafa ho tsy manan-katao raha mamafa sy mandio lalana izy ireo. Ny tsy fanariana ny fako amin'ny tany sy arabe dia hampitombo haingana ny fahafahan'ny fokontany na kaominina iray ny kitapom-bolany izay azo hanatsarana ny foto-drafitrasa isan-karazany. Ampitampiptao amin'ny namana sy fianakaviana isany fa samy tompon'andraikitra amin'ny pesta avokoa ny isam-batan'olona minia mandoto kanefa tsy manampy ny hafa hanadio. Rehefa tsy mandoto, noho izany, dia manadio ho azy.